अजोड, जनरल र सानिमा इन्स्योरेन्स बीच गरिएको तुलनात्मक अध्ययन ! – Insurance Khabar
अजोड, जनरल र सानिमा इन्स्योरेन्स बीच गरिएको तुलनात्मक अध्ययन !
प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०७५, शनिबार २०:०६
अजोड इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स र सानिमा इन्स्योरेन्स नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु हुन् ।
अजोड इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स र सानिमा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई इन्स्योरेन्स खबर टिमले गरेको तुलनात्मक अध्ययन:
तीनै वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी ७० करोड रुपैयाँ छ । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई १ अर्ब पुँजीको लक्ष्य दिएकोमा तीनै कम्पनीले ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिएर १ अर्ब पुँजीको लक्ष्य हासिल गर्ने अवस्था देखिन्छ ।
जगेडा कोषमा अजोड इन्स्योरेन्स नै अघि छ । अजोड इन्स्योरेन्सको जगेडा कोषमा २ करोड ४२ लाख संचित छ भने जनरल इन्स्योरेन्सको जगेडामा १ करोड ५२ लाख रुपैँया छ भने सानिमा इन्स्योरेन्सको जगेडा कोषमा १ करोड ४१ लाख रुपैँया संचित छ ।
बीमा कोषमा सानिमा इन्स्योरेन्स अघि छ । सानिमा इन्स्योरेन्सको बीमा कोषमा १ करोड ७९ लाख छ भने जनरल इन्स्योरेन्सको बीमा कोषमा १ करोड ६९ लाख छ त्यस्तै अजोड इन्स्योरेन्सको बीमा कोषमा ६१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ संचित छ ।
खुद बीमा शुल्क आर्जन रकमको आधारमा
जनरल इन्स्योरेन्सले ५ करोड १५ लाख खुद बीमा शुल्क आर्जन गरको छ भने अजोड इन्स्योरेन्सले ३ करोड ७६ लाख खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सानिमा इन्स्योरेन्सले १ करोड ९ लाख खुद बीमा शुल्क आर्जन गरको छ ।
खुद दावी भुक्तानीको आधारमा
खुद दावी भुक्तानीको आधारमा जनरल इन्स्योरेन्स अघि छ । यो ६ महिनाको अवधिमा जनरल इन्स्योरेन्सले १२ लाख १४ हजार खुद दावी भुक्तानी गरेको छ भने अजोड इन्स्योरेन्सले ११ लाख १ हजार खुद दावी भुक्तानी गरेको छ । सानिमा इन्स्योरेन्सले ८४ हजार खुद दावी भुक्तानी गरेको छ ।
खुद नाफाको आधारमा जनरल इन्स्योरेन्स अघि छ । यो ६ महिनाको अवधिमा जनरल इन्स्योरेन्सले १ करोड २९ लाख खुद नाफा गरेको छ भने सानिमा इन्स्योरेन्सले १ करोड २८ लाख खुद नाफा गरेको छ । अजोड इन्स्योरेन्सले १ करोड २३ लाख खुद नाफा गरेको छ ।
जनरल इन्स्योरेन्सको प्रति शेयर आम्दानी ३ रुपैया ६९ पैसा, अजोड इन्स्योरेनसको प्रति शयर आम्दानी ३ रुपैयाँ ५४ पैसा छ भने सानिमा इन्स्योरेन्सको प्रति शेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ ६६ पैसा छ । प्रति शेयर आम्दानीलाई वार्षिकरण गरिएको छ ।
अजोड इन्योरेन्समा १३ हजार २ सय २८ बीमा लेख कायम छन् भने जनरल इन्स्योरेन्समा ८ हजार ९ सय ८० र सानिमा इन्स्योरेन्समा २ हजार ३ सय ७३ बीमा लेख संख्या कायम छन ।
उपलब्ध तथ्यांक कम्पनीले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण बाट तयार गरिएको हो।